Gaariga Bulsho | Doodwadaag waa Danwadaag.
Gaariga bulsho waa gaari qaad weyn darawalkiisa dhabta ah lama yaqaanno.
Gaarigan si sahlan kuma dhaqaaqo, marka uu dhaqaaqane ma istaago, xitaa qofka furaha ku rogo ee isteerinka hayo ma hagi karo mana istaajin karo illaa uu iskiis u istaago. Gaarigan haduufuraha lagu rogo ma u baahno waddo fiican oo kaliya ee tan xunna si xowli ah ayuu ugu dhaqaaqaa, waxuu u baahan yahay oo kaliya in furaha lagu rogo.
Gaarigan hadba ciddii bulshada qanciso ayaa kaxeeysato. Waxaa igu maqaala ah in SYL oo kaliya wadda gaaban oo nadiifa ku kaxeeyeen. Sidoo kale dowladdii kacaanka ayaa bilowgi hore wadda been ah uga dhigay in ay hagaagsantahay ilowse si dhaqsa ah u galiyay qardajeex, markii danbe ee ay isku dayeen in ay soo laabaanne wuu ka diiday illaa uu xuduudda Soomaaliya kala gudbo illaa iyagiina ay kala baxeen.
Waxaa soo helay jabhadihii Soomaaliyeed ee SS ta badnaa, oo si sahlan wadanka ugu soo celiyay, laakiin nasiib darro uma haaynin waddo hagaagsan ee uu maro, waxeey ku soo celiyeen waddadii kacaanka mid ka qardajeex iyo jafal badan, iyagoo is qilaafay owgeed way hanan waayeen waana ka wada daateen, waxay isku dayeen in ay istaajiyaan ama qolaba gobal ku is taajiso waase ka diiday oo uu lugta wada-marsiiyay wadankina burburiyay kuna dhaxraftay.
Waxaa isgoo shidaal la aan ah oo Muqdisho yaalo dayac tir ku sameeyay wadaaddo aan iska warqabin na fileeynin in uu u kici doono si fudud ugu dhaqaaqay, waxeyna damceen in ay aduunka dhan uga shaqeeystaan waana ka diiday oo wadadaadiyay laakiin isgoo xowli ku socdo ayay ka daateen dhimasho iyo dhaawac badan ayay kala kulmeen Soomaalina way ku halakeeyeen, walow la sheego in haraadigoodi wali qaar haaystaan una istaagi la’yahay.
Waxaa wadadda ka arkay oo gacanta u haatiyay koox uu horkacayo Farmaajo ma u istaagin laakiin waxuu siiyay fursad lagu raaci karo, shirka ayay ku aruureen, way ka dagi la’yihiin wayna wadi la’yihiin. Hadda gaariga mana socdo mana is taagno waa riimi haayaa mana la ogo sida uu ku danbeeyn doono.
Ma wadaadada daallan ayaa horay iyo isteerinka soo mari doon? ama Farmaajo ayaa waddo hagaagsan u heli doono, mise sidii lagu yaqiinay intuu wadadaadiyo bulshada halakeyn doonaa? Taasi waa farta ii taagan.
kheyrka Allaha na waafajiyo.
Sheekh Calikheyr Sh Cumar Guure
Fahanka Nolosha (Qeybtii 1aad).